Wararka Maanta: Arbaco, July 10, 2013-Madaxweynaha Somaliland oo si kadis ah ku booqday hay’adaha dowliga ah Warbixinno kala duwanna dhageystay (SAWIRRO)
Madaxweynuhu hay’adaha uu kormeerka ku soo maray waxa ka mid ah Cisbitaalka Caruurta, wasaaradda Warfaafinta, Dawladda Hoose ee Hargeysa iyo wasaaradda Duuulista Hawadda oo dayac tir balaadhan ka socdo.
Madaxweynuhu waxa uu kormeerkiisa ku bilaabay Dhakhtarka caruurta ee Maxamed Aadan Sheekh oo ay hirgalisay Talyaanigu, waxaanu warbixino ka dhagaystay dhakhaatiirtii ku suganayd oo u badnayd Ajanabi, waxaanu soo indho indheeyey caruurta ku jirtay cisbitaalka isagoo ilaahay u baryey inuu caafimaad siiyo.
Waxa kale oo uu soo maray Wasaarada Warfaadinta Wacyigelinta iyo dhaqanka, waxaana warbixino ka siiyey wasiirka warfaafinta, Agaasimaha Guud ee Wasaarada, Agaasimaha Tv-ga Qaranka, Agaasimaha Idaacada, Agaasimaha Farsamada iyo Agaasimeyaasha kala Duwan ee Wasaarada.
Waxa kale oo uu madaxweynuhu soo maray wasaaradda Duulista iyo Hawadda Sare, waxaana hawlaha shaqo ee ka jirta madaarka warbixin ka siiyey wasiirka Duulista Maxamud Xaashi oo sheegay inay meel fiican u marayso dib u habaynta iyo dayactirka lagu waddo madaarka Hargeysa oo muddo ka badan lix biloood u xanibna dayactirkaasi lagu samaynayo.
Sidoo kale, waxa uu kormeerkiisan ku tagay Dawlada hoose ee caasimada Hargeysa, halkaas oo uu kula kulmay Maayarka Caasimada iyo maayar ku xigeenka oo ku jira hawlohooda shaqo ee caadiga ah.
Kormeerka Madaxweynaha oo ahaa mid aanay ka war hayn Bulshada iyo Hay'adaha kala Duwan ee Dalku waxa ku wehelinaayey Wasiiru Dawlaha Madaxtooyada Maxamed Muuse Abees, Xoghayaha Gaarka ah ee Madaxweynaha Mudane Cali Axmed Cali, Taliyaha Ciidanka Ilaalada Madaxtooyada Gen Faysal Kaamil Ciise iyo Taliyaha Ciidanka Booliska Mudane Cabdiaahi Fadal Imaan, haseyeeshee muu wadan tagnikadii iyo ciidankii badnaa ee looga bartay.
Si kastaba ha ahaatee, kormeerada sidan oo kale waxay keenaysa inay masuuliyiintu si fiican ugu shaqeeyaan dadweynaha, isla markaana aanay ka maqnaan xafiisyada saacadaha shaqaddu ka socoto.
Dhinaca kale, madaxweynuhu waxa uu shacabka reer Somaliland iyo islaamkaba ugu hambalyeeyey bilashadda bisha barakaysan ee Ramadaan, waxaanu ilaahay u baryey inay bishaa cibaado ku dhamaystaan nabadgalyo iyo badhaadhe, kuna gaadhsiiyo sanadkan sanadkiisa caafimaad iyo barwaaqo, isagoo inta xauunsanaysa ee aan awoodi karina ilaahay u baryey inuu caafiyo.